DAAWO VIDEO:Cajiib Gabadh wasiirad Koonfur Galbeed oo u Qaaday Hees Dhiga ku Karisey Muuse Biixi iyo M.Kaahin"isaaq iyo Dhulbahante Ma haysano" - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Cajiib Gabadh wasiirad Koonfur Galbeed oo u Qaaday Hees Dhiga ku Karisey Muuse Biixi iyo M.Kaahin”isaaq iyo Dhulbahante Ma haysano”
October 20, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 1
Cajiib Gabadh wasiirad Koonfur Galbeed oo u Qaaday Hees Dhiga ku Karisey Muuse Biixi iyo M.Kaahin.
DAAWO VIDEO: Turkiga oo Ku Dhawaaqday Farogalin Military Soomaliya iyo Awood Ciidan ay adeegsanayso
Runtii, heerka iyo tayada gurmadka degdegga ah ee ay reer Baydhabood iyo Dawladda Federaalkaba ufidiyeen muwaaddiniintaas Soomaaliyeed ee sida arxandarrada leh loo qixiyay waa arrin mudan in kun jeer loogu riyaaqo oo looguna faano haddii aynu Soomaali nahay.
Sababta aan sidaas u leeyahay waxaa weeye, in sida taariikhda dalkeenna looga bartay la arki jiray maato Soomaaliyeed oo darxumeysan oo saf dheer uugu jira jawaanno raashin ah oo ku summadeysan astaamaha sida “UNHCR”,”WFP”, “Red Cross”, “USA AID” iwm oo ayna quudinayaan dad ajnabi ah.
Tan hadda Baydhabo ka dhacday, iyo horteedna tusaalooyinkii wacnaa ee magaalooyinka Puntland lagu arkay markii ay maatadii reer koonfureed ee Yemen kasoo qaxay oo Berbera laga ceyriyay sida heerka sare ahaa ugu gurmadeen, waa mucjisooyin raynrayn iyo rajo weyn ku abuuraya ruux kasta oo uu xididkiisa Soomaalinimo weli qoyanyahay.
In aan indaha la saarin maatadaas oo astaamaha aan kor kuxusay fayl dheer uugu jira, balse ay Soomaalidu u gurmatay oo wax walbana ufidisay, ayaa farxad iyo horumar lagu faano noogu filan xaqiiqdii.
Jawaabna waxaa Muuse Maangaab uugu filan, hadalkaas ay gabadhaas Soomaaliyeed wajiga lacnaddu madoobeysay kaga dhirbaaxday. Falalkiisa waxshinimada ahna, isaga iyo jabhaddiisan yar ee uu horboodayo ayay u yihiin bombo-gacmeedyadii ay cagahooda ku hoos tuureen; sixun oo kamadambeys ah ayayna ula qarxi doonaan mar dhow.